लेखक: यस AI लेखन सहायकको साथ तपाईंको ब्रान्डको आवाज र शैली गाइड विकास गर्नुहोस्, प्रकाशित गर्नुहोस् र लागू गर्नुहोस्। Martech Zone
लेखक: यस AI लेखन सहायकको साथ तपाईंको ब्रान्डको आवाज र शैली गाइड विकास गर्नुहोस्, प्रकाशित गर्नुहोस् र लागू गर्नुहोस्।
बिहीबार, मे 12, 2022 बिहीबार, मे 12, 2022 Douglas Karr
जसरी कुनै कम्पनीले संगठन भरि एकरूपता सुनिश्चित गर्न ब्रान्डिङ गाइड लागू गर्छ, त्यसैगरी तपाईंको संगठनको सन्देशमा एकरूपताको लागि आवाज र शैली विकास गर्नु पनि महत्त्वपूर्ण छ। तपाइँको भिन्नतालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चार गर्न र तपाइँका दर्शकहरूसँग सीधा बोल्न र भावनात्मक रूपमा जडान गर्न तपाइँको ब्रान्डको आवाज महत्त्वपूर्ण छ।
आवाज र शैली गाइड के हो?
भिजुअल ब्रान्डिङ गाइडहरूले लोगो, फन्ट, रङ र अन्य भिजुअल शैलीहरूमा फोकस गर्दा, आवाज र शैली गाइडले तपाईंको ब्रान्डले प्रयोग गरेको शब्दावली, शब्दावली, र टोनमा फोकस गर्छ जब मानिसहरूले तपाईंको बारेमा सुनिरहेका हुन्छन् वा पढ्छन्।
त्यहाँ ब्रान्डका धेरै पक्षहरू छन् जुन तपाईंले आफ्नो आवाज र शैली गाइडमा समावेश गर्नुपर्छ:
मान्छे - तपाईको लक्षित ग्राहकका सबै सांस्कृतिक, जनसांख्यिकीय, शिक्षा, र भौगोलिक विशेषताहरू के हुन्?
बोध - तपाइँ तपाइँको व्यक्तित्वहरु लाई तपाइँको ब्रान्ड को बारे मा भएको धारणा के हो?
मिशन - तपाईको ब्रान्डको समग्र मिशन स्टेटमेन्ट के हो?
टोन - तपाइँ तपाइँको श्रोताहरु संग राम्रो संग प्रतिध्वनित गर्न को लागी आवाज को स्वर के हो? के तपाईं अनौपचारिक, सकारात्मक, ऊर्जावान, अद्वितीय, चंचल, प्रेरणादायक, आदि बन्न चाहनुहुन्छ?
समानार्थी शब्द - कुन शब्दहरू तपाइँको ब्रान्ड, उत्पादनहरू, वा सेवाहरूसँग पर्यायवाची छन् जुन तपाइँ बारम्बार प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ?
एन्टोनीमी - तपाईको ब्रान्ड, उत्पादन, वा सेवाहरू वर्णन गर्न कुन शब्दहरू कहिल्यै प्रयोग गर्नु हुँदैन?
Hypnotmy - तपाईको उद्योग वा संगठनको लागि कुन शब्दावली विशिष्ट छ जुन एकरूप हुनुपर्छ?
अनुकूलन - तपाईको ब्रान्ड, उत्पादन, वा सेवाको लागि कुन शब्दावली अनुकूल छ जुन अरू कसैले प्रयोग गर्दैन?
एउटा उदाहरण: हाम्रा प्रमुख क्लाइन्टहरू मध्ये एकले तपाईंले गर्न सक्ने साइटको मालिक हुनुहुन्छ अनलाइन लुगा अर्डर गर्नुहोस्। लुगाहरू मध्यम मूल्यका छन् तर उच्च गुणस्तरका छन्, हामी सस्तोमा किफायती जस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्छौं ... जसले गुणस्तरको नकारात्मक अर्थ राख्छ। हामी पनि बताउँछौं कुनै झन्झट भन्दा फर्किन्छ झन्झट मुक्त फर्काउँछ। जबकि तिनीहरू दुवैको एउटै अर्थ छ, शब्द भएको मुक्त हामीले साइट भ्रमण गर्ने व्यक्तिहरू - वयस्क महिलाहरूसँग कुरा गर्दा साइटभरि गलत टोन सेट हुनेछ।
लेखक: टोलीका लागि एआई लेखन सहायक
धेरै व्यक्तिहरूले आफ्नो भिजुअल ब्रान्डिङ गाइडको साथमा आवाज र शैली गाइड समावेश गर्छन् ताकि नयाँ कर्मचारीहरू वा ठेकेदारहरू ब्रान्डको लागि सामग्री विकास गर्न एकरूप हुन सक्छन्। यसलाई पीडीएफमा राम्रोसँग समावेश गर्न सकिन्छ जुन अनुरोध गर्दा वितरण गरिन्छ। जबकि त्यो उपयोगी सुनिन्छ, यो धेरै छैन कार्यवाही योग्य तपाईंको आवाजको स्थिरतामा रुचि राख्ने मानिसहरूले मात्र तपाईंको आवाज र शैली गाइड प्रयोग गर्न दिनेछन्।
लेखक एक कृत्रिम बुद्धि (AI) टोलीहरूका लागि लेख्ने सहायक जसमा तपाईंको टोलीलाई चाहिने सबै कुराहरू छन्। तपाईंले साइन अप गर्नुभएको प्याकेजमा निर्भर गर्दै, तपाईंले निम्न सुविधाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ:
स्वत: सुधार र स्वत: पूर्ण हिज्जे, विराम चिह्न, र व्याकरणीय त्रुटिहरूको लागि।
स्निपेट्स - सामान्य वाक्यांश वा पाठका लागि व्यक्तिगत र टोली स्निपेटहरू जुन बारम्बार प्रयोग गरिन्छ।
सिफारिसहरू - तपाईंको लेखन सुधार गर्न सिफारिसहरू।
टर्मिनलजी - स्वीकृत, पेन्डिङ, र अस्वीकृत सर्तहरूको लागि एक शब्दावली व्यवस्थापन उपकरण।
लेखन शैली - पठनीयता लक्ष्य, पूंजीकरण, समावेशीता, आत्मविश्वास, र स्पष्टता अनुकूलन।
टीम भूमिकाहरू - तपाईंको शब्दावली र आवाज सेटिङहरू विकास गर्नका लागि भूमिका र अनुमतिहरू बनाम प्रयोगकर्ताहरू जुन तिनीहरूलाई लागू गर्न आवश्यक छ।
स्टाइलगुइड - तपाईंको संगठनको लागि होस्ट गरिएको, प्रकाशित, र साझा गर्न मिल्ने शैली गाइड।
लेखक Chrome, Microsoft Word, र Figma मा काम गर्दछ। तिनीहरूसँग तपाईंको सम्पादकीय प्रक्रियाहरूमा तिनीहरूको उपकरण एकीकृत गर्नको लागि एक बलियो API छ।
नि: शुल्क लेखक प्रयास गर्नुहोस्
खुलासा: म एक सम्बद्ध छु लेखक र म यस लेखमा मेरो सम्बद्ध लिङ्क प्रयोग गर्दैछु।
टैग: aiएन्टोनीमीकृत्रिम बुद्धिब्रान्ड मिशनब्रान्ड बोधब्रान्ड आवाजChromeफिमाव्याकरण जाँचhypnotmyमाइक्रोसफ्ट शब्दव्यक्तिविराम चिन्ह जाँचहिज्जे जाँचशैली गाइडसमानार्थी शब्दशब्द शब्दावलीटोनआवाजआवाज र शैली गाइडलेखकलेखन सहायक
Privy: यो पूर्ण ईकमर्स मार्केटिङ प्लेटफर्मको साथ तपाईंको अनलाइन स्टोर बिक्री बढाउनुहोस्
शून्य-पक्ष, प्रथम-पक्ष, दोस्रो-पक्ष, र तेस्रो-पक्ष डेटा के हो?